इसेवाबाट एयरलाइन्स् टिकट काट्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक ! - Arthasansar
इसेवाबाट एयरलाइन्स् टिकट काट्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक !
मंगलबार, २४ चैत्र २०७७, १६ : ३८ मा प्रकाशित
भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवामार्फत हवाइजहाज टिकट काट्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक पाइने भएको छ । इसेवा मार्फत आन्तरिक तर्फको एयरलाइन्स्का कुनै पनि गन्तव्यको टिकट काट्ने यात्रु यस योजनामा सहभागी हुनेछन् । हरेक दिन तीन जनाले तीन हजारसम्मको टिकटमा शतप्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् भने त्यसभन्दा माथिको टिकटमा तीनहजार रूपैयाँ छुट पाउनेछन् । यो योजना ३१ चैतसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
यस्तै जाउँ है पोखरा अभियान अन्तर्गत पोखरा जाने यात्रुहरुले एयरलाइन्स् टिकट काट्दा, टिकट बुकिङ, होटल तथा रेष्टुरेन्ट तथा साहसिक खेलहरूमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्नेछन् । यात्रुहरुले इसेवा मार्फत टिकट काटिसकेपछि ‘जाउँ है पोखरा’ भन्ने विवरणमा क्लिक गरि यस्तो छुट पाइनेछ । होटल तथा शाहशिक खेलमा छुट प्राप्त गर्नका लागि इसेवाबाट प्रि बुकिङ गर्नुपर्नेछ अथवा हवाइ टिकट देखाउनुपर्नेछ । अहिले पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखरा र इसेवाको सहकार्यमा जाउँ है पोखरा अभियान अन्तर्गत पोखरा घुम्न जानको लागि विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु भइरहेका छन् ।
मोबाईल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवामा हाल प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ४२ लाख नाघेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ६० लाख जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब एक लाख १० हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हाल इसेवामा मर्चेन्टको संख्या तीन लाख २ लाख नाघिसकेका छन् ।
११ औं जितपुर सिमरा गोल्ड कप - २०७७ को टिकट अनलाइन ‘खल्ती’ एप बाट किन्न सकिने; क्यासब्याक पनि
इसेवा र औषधी व्यवसायी संघबीच सम्झौता, क्युआर भुक्तानी तथा डिजिटल पार्टनरसीप
इसेवा र वर्ल्ड रेमिटबीच सम्झौता, ५० देशहरुबाट सिधै अब इसेवा खातामा पैसा पठाउन सकिने
नेपाल टेलिकमका १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बरहरु, कुन नम्बरबाट के सेवा ?
रियलमी सी १५ को फोनको मूल्य सस्तियो